ကလိုစေးထူး: မှန်ရှေ့ကလူ… ကျနော်
ကိုကလိုစေးထူးရေ ဘာလို့ လဲတော့ မသိဘူး ဒီစာဖတ်ရင်း မျက်စိထဲမှာ သွားမြင်ပြီး ရယ်ချင်နေတာပဲ သိတယ် ပေးချင်တဲ့ ခံစားချက်ကဘာလဲ တော့ သိဘူး ရယ်ချင်တာပဲ သိတယ် အဟီး ဆောတီး
May 29, 2007, 10:22:00 PM
မိုက်တယ် ဒါမျိုး ရေးပုံတွေ သဘောကျတယ်ဗျာ..
မယ်လိုဒီမောင် ပြောသလို နည်းနည်းတော့ ရယ်ချင်သား ခွိ..
May 30, 2007, 12:23:00 AM
Ko Tian said...
I might be the guy who made your scar...
(You know, it'sabetter way to draw your attention)
Good writing, carry on.
အင်း .. သိပ်တော့ မဟုတ်တော့ဘူး ထင်တယ်။
မှန်ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက် မဲ့လိုက် .. နှုတ်ဆက်လိုက် အော်ငေါက်လိုက်နဲ့ … ။
ဘလော့မှာ စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းရှာလဲ တခြားနည်းနဲ့ ရှာပါလား .. ။
တော်ကြာ ဘေးလူတွေမြင်ရင် …. တမျိုးတမည် ထင်နေပါဦးမယ်။
ဒါနဲ့ … လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကပုံနဲ့ လက်ရှိ ကြည့်ကောင်းနေတဲ့ ပုံကို ယှဉ်ပြီး ဘလော့မှာတင်လိုက်ပါလား။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်း အကဲခတ်လို့ ရတာပေါ့ … ။
ဟင်း ဟင်း ဟင်း :P
May 30, 2007, 5:50:00 AM
အဲ...မမေ ရယ်ပုံကို အရမ်းရယ်ချင်တယ်...ဟီဟီ...
ကဲ ကိုကြီး ပြေးပေါက်မှားအောင် မမေ ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့...
May 30, 2007, 6:58:00 AM
ဇရာရဲ့နောက်မှာလဲ အလှတရားတွေ ရှိတတ်ပါတယ်..
ဒီပို့စ်လေးက ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ အလွန်လေးနက်ပါတယ်..
May 30, 2007, 5:09:00 PM
ဘာမဟုတ်တာလေးလဲ ရေးတတ်ရင် စာဖြစ်တယ်လို့ ကြားဖူးတာနဲ့ မှန်ရှေ့မှာ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ်ကြည့်ရင်းနဲ့ တွေးမိတဲ့ အတွေးကို ချရေးလိုက်တော့ အားပေးလိုက်တာ အားရစရာကြီး။ `ရယ်ရတယ်တဲ့´။ :D
ရယ်လိုက်ကြတာလဲ.. အဟိတွေရော၊ ခွိတွေရော.. ဟိုဘက်အိမ်က ဆရာလေးဆို တဟင်းဟင်းနဲ့ သွားတောင်စေ့ရဲ့လားမသိ..။ အဲဒါကိုမှ အားပေးအားမြှောက် ထောက်ခံပြီး ရယ်တဲ့ s0wha1က ရှိသေးသဗျား။ နောက်တခါဆိုရင် ဟာသရေးလို့ရတဲ့ သဘောရှိတယ်။ =))
စာရေးသူရဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောရရင်တော့.. အဟမ်းးး။ အသက်တွေကြီးလာလို့ ဇရာကို ချဉ်းကပ်လာရင်တောင် စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ထားလို့ အပြုံးပန်းတွေဆင်နိုင်ရင် လူဟာ နုပျိုနေမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရေးတာပါဗျာ။ :)
May 30, 2007, 6:38:00 PM
အရမ်းမိုက်တယ်၊ ရေးတတ်လိုက်တာ၊ လေးစားပါတယ်၊ ရဲဘော်ဆက်လုပ်၊ အားပေးနေပါတယ်၊ ဟာသရသလေးရတာပေါ့၊ လူတွေကိုရယ်အောင်လုပ်နိုင်တာ နည်းတဲ့အရည်အချင်းလား၊ တော်တယ်တော်တယ်၊ မရီဘူးနော်၊ ဟီးဟီး
May 30, 2007, 7:30:00 PM
ဟာ ကိုစေးထူးက လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ။ ဒါလေးကလည်း အပီအပြင်ကောင်းပ ။ ဖတ်ရင်း မော်နီတာကြီးကိုကြည့်လို ဂျစ်တူးတယောက် ပြုံးပြနေလေရဲ့ ။
May 31, 2007, 10:55:00 PM
ကျနော်တောင် သဘောတော်တော်ကျသွားတာ ကော်မန့်တွေထပ်ဖတ်တော့ ပိုရီရတယ်ဗျ...ဟီး
Jan 5, 2008, 12:25:00 AM